Hafatra Pentekosta 2009 avy amin'ny FJKM – FJKM Ambavahadimitafo Hafatra Pentekosta 2009 avy amin'ny FJKM |
Hafatra Pentekosta 2009 avy amin'ny FJKM
Mamangy anareo fiangonana sy tompon’andraikitra ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny tenako, Filohan’ny FJKM eto Madagasikara. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy ao amin’ny fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany.
Miarahaba anareo nahatratra ny Pentokosta izay fotoana hanamarihan-tsika fiangonana ny fahatsiarovana ny nanomezan’Andriamanitra hery mahagaga tamin’ny alàlan’ny fanahy masina ny fiangonana voalohany, hery hanorenana ny fifankatiavanas sy ny fiombonan’ny mino.
Omen’Andriamanitra aina vaovao indray ny fiangonany mba hanànany hery mihoatra noho ny tamin’ny lasa manoloana ny ady tsy maintsy hatrehany ety an-tany, na dia efa mpandresy sahady aza miaraka amin’I Kristy na dia any an-danitra aza izy. Mifampivavàha isika mba tsy ho reraka na ketraka, aza kivy fa Andriamanitra tsy maha ela ny teny fikasàny, fa ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Momba ny fiangonany hatrany ny Tompo, ary tsy mamela azy ho irery. Aza miherikerika foana fa miaraka amin’ny fiangonany, miaraka aminao amin’ny alàlan’ny fanahiny ny Tompony